Semalt Explained Sida Loo Beddelayo Istaraatiijigaaga SEO Nidaamka Gaarka ah
Waxaa jira qadar weyn oo tartan ku jira barta SEO, kaliya raadiee "SEO" ama "marketing marketing" oo waxaad arki doontaa malaayiin natiijooyin iyo tan ay ka mid yihiin ganacsiyada iyo dadka u dagaalamaya atoogta muuqaalka. Faa'iidada u adeegida naafeyn aan caadi ahayn ama mid gaar ah waa inaad yeelan doontaa tartan yar laakiin waad haysataadhagaystayaasha yaryar iyo khayraadka si ay kaaga caawiyaan inaad ku guulaysato. Maxay u qaadataa si ay u noqoto mid ku guuleysta niches gaar ah iyo wanaajisofursadaha guusha SEO
Jack Miller, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare ,waxay wadaagaan talooyinka waxtar leh ee kaa dhigi doona ololeyaal ah olole SEO ah.
Ka hor inta aanad jirin, qaado waqti aad ku barto oo aad fahamtid dhegeystayaashaada.Waxaad ka bilaabi kartaa cilmi-baaris asaasiga ah, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad sii barato baahidaada macaamiishaada, waxyaabaha aad ufududeysid iyo caadooyinka.Tani waxay kaa caawinaysaa inaad ka takhalusto xayawaanka ku saabsan sida dadku u qabtaan baaritaannada, ku siiyaan fariin aad u fiican oo ku saabsan waxyaabo ka fiican oo kaa dhigi doonaku habboon baahiyahaaga dhagaystayaasha.
Isticmaal Qoraallada mudada dheer
Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu bilaabi karo cilmi-baarista muhiimka ah ee dheeraadka ah waa marka aad fahantidsida dhageystayaashu u raadiyaan macluumaad ama alaab ku jira nuuggaaga. Update Google ee Hummingbird iyo Panda ayaa saameyn xun ku yeeshaykeywords dhaqameedyo laakiin ereyada dheeraadka ah ee dheeraadka ah ayaa weli shaqeeya niches gaar ah. Halkii aad xoogga saari lahayd ereyada muhiimka ah ee ku siinaya gaadiid dheeraad ah,Isticmaal ereyada dheeraadka ah ee la yiraahdo i.e su'aasha iyo jawaabta jawaabta, kuwani waa kuwa ugu fiican ee nuucyada gaarka ah
Fikradaha Asalka ah kaliya
Halkii laga soo bandhigi lahaa fikradaha dadka kale, si dhab ah ula soo baxfikradaha asalka ah. Waxaad ku samayn kartaa tan iyadoo la adeegsanayo cilmi-baaris, iyo la imow su'aalaha aan mar hore la weydiin..Tani waxay kuu horseedi doontaa adiga iyoTilmaamahaaga si aad u weyn.
Raadi meel bannaan daabacadaha goobta
Si loo wanaajiyo darajooyinkaaga raadinta dabiiciga ah iyo maamulka domain,waxaad ubaahan tahay in aad ku soo xiratid xariiro aad ku xiran tahay sida ugu wanaagsan ee aad ujirta. Tani waxay ka dhigan tahay inaad u baahan tahay inaad ka shaqeyso weriyayaasha caadiga ah. Waxaad qori kartaacontent taasi oo qayb ahaan khuseysa caanahaaga - laakiin mawduuca waa inuu ahaadaa mid qiimo leh dadka dhagaystayaasha ah. Ujeedkani wuxuu noqon karaawaxaad u baahan tahay inaad sameyso is-afgarad, laakiin xiriirrada aad heleyso waxay kor u qaadi doontaa joogitaankaaga.
Wax ka Baro Dhibaatooyinkaaga
Intii aad isku dayi lahayd inaad la tartanto kuwa ku wada siman sida adiga,kula xiriir iyaga oo baro waxa ay samaynayaan si ka duwan oo aaney hilmaamin in ay la wadaagaan fikradahaaga sidoo kale. Ma jiraan wax khatar ah sababtoo ahHooskaagu yar yahay laguma qasbi doono
Maadaama aadan haysan xog ah inaad ka shaqeyso ololahaaga SEO, bilowyar yar. Isticmaal ereyada muhiimka ah dhowr jeer waqti kadibna qor qayab cusub ka hor intaanad bilaabin furitaankaaga. Tani waxay kaa caawineysaa inaad ururiso macluumaadka noqon doonamuhiim ah markaad aadeyso weyn
Isticmaal warbaahinta bulshada sababtoo ah waa habka ugu fiican ee dadka loo heloadiga. Warbaahinta bulshada ayaa sidoo kale ah meesha ugu fiican ee lagu hagaajin karo aragtidaada ka hor intaadan diirada saarin qiimeynta raadinta. Waxay sidoo kale kaa caawin doontaa inaad isku xirtooo leh saamileeyaal, samee qodobkaaga iyo hagaajinta soo socda.
Abuuri Community Community
Tani waxaa lagu sameyn karaa iyada oo loo marayo kulan bulshadeed halkaas oo isticmaalayaashaadu ay noqon doonaanisku xidhiidhiya. Tani waxay dhiirigelineysaa daacadnimo weyn waxayna kaa caawineysaa inaad la soo baxdo wax cusub.
Si loo dhiso xiriir wanaagsan oo lala yeesho daabacayaasha caadiga ah,waxaad u baahan tahay inaad bixiso qaar ka mid ah waxyaabaha caadiga ah. Waxaad samayn kartaa tan adoo kala qaybinaya bartaada qaybo hoose laakiin ha lumin diiradda saarida shabakadaada Source .Tani waxay ku siin doontaa dhagaystayaal balaadhan oo akhristaya oo la wadaagaya macluumaadkaaga